मार्फत मद्दत गर्दै
जीवनका सबै चरणहरू
हामी धेरै प्रेरणादायी व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं जसले हामीले पूरा जीवन जिउन सहयोग गर्छौं ।
हाम्रा कार्यक्रमहरू बारे थप जान्नुहोस्
गेटवे सामुदायिक सेवाहरू विश्वास गर्दछ कि सबै मानिसहरू धेरै मूल्यवान छन्। हामी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनकालभर सहयोग गर्न अभिनव, उच्च-गुणस्तर, दीर्घकालीन सेवाहरू प्रदान गर्दछौं ताकि तिनीहरू अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सकून्।
25 वर्ष भन्दा बढीको लागि, हामी अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अधिकतम क्षमतामा पुग्न मद्दत गर्ने प्रयासमा समर्थन गर्न जारी राख्छौं। हाम्रो समुदायमा आधारित सेवाहरूको विस्तृत विविधताले तपाईंको परिवारको आवश्यकताहरू पूरा गर्न धेरै विकल्पहरू, नियन्त्रण र लचिलोपन प्रदान गर्दछ।
हामी विकासात्मक असक्षमता अनुभव गर्ने व्यक्तिहरू, मस्तिष्क प्राप्त चोटहरू र वेटरन्स घर र समुदायमा आधारित सेवाहरू उनीहरूलाई सकेसम्म स्वतन्त्र रहन मद्दत गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।
हामी वरिष्ठहरूलाई सक्रिय रहन र घरमा बस्न स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछौं।
अटिजमका लागि सेवाहरू
गेटवे अटिजम सेन्टरले अटिजम स्पेक्ट्रम र/वा व्यवहारलाई असर गर्ने असक्षमतामा निदान भएका व्यक्तिहरूका लागि सेवाहरू उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित छ।
स्थानीय विक्रेताहरूसँगको हाम्रो सहकार्यले यस वर्ष हजारौं व्यक्तिहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न मद्दत गरेको छ।
हामीले राज्यव्यापी सेवाहरू प्रदान गर्ने ग्राहकहरू
गत वर्षको तुलनामा कोष सङ्कलन डलर बढेको छ
"गेटवेहरू गेब्रियलको प्रगतिमा ठूलो मद्दत भएको छ। उनीहरूले गेब्रियललाई मास्टर गर्न सिकाएको सीपहरूले उहाँलाई जारी राख्न र निर्माण गर्नको लागि यस्तो ठूलो जग खडा गरेको छ। कर्मचारीहरू उहाँका लक्ष्यहरू सञ्चार गर्नका साथै मेरा चिन्ता र विचारहरू सुन्नमा उत्कृष्ट छन्। --हामी सँगै छौं! म धेरै आभारी छु!
"प्रारम्भिक हस्तक्षेपले मेरा तीनै बच्चाहरूको लागि अचम्मको काम गरेको छ। हाम्रो सेवा संयोजकले सधैं हाम्रा सरोकारहरू सुन्नुहुन्छ, नयाँ विचार वा सुझावहरू प्रदान गर्नुहुन्छ र हाम्रा बच्चाहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ। मलाई यो कार्यक्रमको बारेमा सबै कुरा मन पर्छ। यसले धेरै परिवार र बच्चाहरूलाई मद्दत गर्दछ। मेरा छोराछोरीको सफलतामा सहयोग गर्ने हरेक व्यक्तिको लागि म धेरै आभारी छु। धन्यवाद!!"
गेटवेहरूमा COVID-19 कोरोनाभाइरस चिन्ताहरू